Devuan 4.0 "Chimaera" sitere na Debian 11, Linux 5.10 na ndị ọzọ | Site na Linux
Ọchịchịrị | 14/10/2021 10:51 | Emelitere ka 14/10/2021 21:54 | Nkesa
Mwepụta nke ọhụrụ version nke Devuan 4.0 "Chimaera", nke bụ ndụdụ nke Debian GNU / Linux nke na -adịghị abịa na systemd. Alaka ọhụrụ ahụ na -ewebata mgbanwe dị na ngwugwu Debian 11 "Bullseye". Iji budata ugwu dị ndụ wee wụnye ihe oyiyi iso nwere ike maka AMD64, i386, armel, armhf, arm64, na ppc64el architectures.
Ihe oru ngo a agbaala ihe dị ka ngwugwu Debian 400 nke gbanwere iji wepu njikọ sistemụ, nyegharịa aha ma ọ bụ kwekọọ na akụrụngwa Devuan.
Abụọ abụọ (devuan-baseconf, jenkins-debian-gluu-buildenv-devuan) ha nọ naanị na Devuan ma nwee njikọ na ịhazi ebe nchekwa na ijikwa sistemụ nrụpụta. Ma ọ bụghị ya, Devuan dakọtara na Debian n'ụzọ zuru oke ma enwere ike iji ya bụrụ ntọala maka omenala Debian na -ewu na -enweghị sistemụ. Enwere ike ibudata ngwugwu akọwapụtara na Devuan site na ebe nchekwa .devuan.org.
Ntọala ndabara dabere na Xfce na onye njikwa ngosi Slim. KDE, MATE, cinnamon, LXQt na LXDE dị maka ịwụnye. Kama systemd, a na -enye sistemụ mmalite SysVinit kpochapụwo, yana sistemụ oghere na nhọrọ runit.
Enyere ikike na-enweghị D-Bus, na-enye gị ohere ịmepụta nhazi desktọọpụ pere mpe dabere na igbe ojii, fluxbox, fvwm, fvwm-kristal, na ndị na-ahụ maka windo oghere.
Iji hazie netwọkụ, a na -enye nhọrọ nhazi NetworkManager, nke anaghị ejikọ ya na sistem. Kama systemd-udev, jiri eudev, ndụdụ nke udev sitere na ọrụ Gentoo. A na -eji Consolekit jikwaa nnọkọ ndị ọrụ na Xfce na MATE ebe desktọpụ ndị ọzọ na -eji elogind, ụdị logind na -ejikọtaghị na sistemụ.
1 Isi akụkọ ọhụrụ nke Devuan 4.0 "Chimaera"
1.1 Budata Devuan 4.0 "Chimaera"
2 Etu esi kwalite na Devuan 4.0 “Chimaera” site na Devuan 3.x?
Isi akụkọ ọhụrụ nke Devuan 4.0 "Chimaera"
Na ụdị ọhụrụ nke sistemụ a Emegoro ịkwaga na ngwugwu ngwugwu Debian 11, nke ejikọtara nchịkọta ya na Debian 11.1 na karịa obi niile nke sistemụ ahụ na -agagharị na Linux kernel 5.10, na mgbakwunye, ugbu a, a na -ahapụ onye ọrụ ịhọrọ ịhọrọ sysvinit, runit na OpenRC sistemụ.
N'aka nke ọzọ, agbakwunyere akpụkpọ ọhụrụ maka ihuenyo nbanye, onye njikwa nbanye na desktọpụ, na mgbakwunye ịgbakwunye nkwado maka ndị na -ahụ maka ihuenyo gdm3 na sddm, na mgbakwunye Slim.
Achọpụtakwara na enyere ikike iji na -enweghị systemd gburugburu onye ọrụ dị na Debian.
Na maka ndị anya isi, e nyela usoro nrụnye na-eduzi olu na nkwado maka ngosipụta braille.
Na mgbakwunye, agbakwunyere maka gburugburu desktọpụ LXDE agbakwunyere n'ụdị nkesa ọhụrụ a.
Budata Devuan 4.0 "Chimaera"
Ọ bụrụ na ịchọrọ ibudata nkesa Linux a ị ga-aga ya ukara website na na ya download ngalaba ị nwere ike nweta ihe oyiyi sistemụ site na otu n'ime enyo ndị dị ya. Ọ kacha mma iji nke kacha gị nso, ndị njikọ bụ nke a.
Etu esi kwalite na Devuan 4.0 “Chimaera” site na Devuan 3.x?
Si Ọ bụrụ na ị nwere Devuan mbipute 3.x arụnyere, ị nwere ike imelite ọhụrụ mụ version enweghị mkpa ka ịwụnye usoro.
Maka nke a ị ga-emepe ọnụ ma rụọ iwu ndị a. Nke mbu anyi ga - agbakwunye ebe nchekwa Devuan 3.0 na isi iyi anyi.list, nke di na uzo: /etc/apt/sources.list
Anyị na-edezi ya na nchịkọta akụkọ anyị họọrọ ma gbakwunye ebe nchekwa ndị a (ọ dị mkpa ịza nchekwa ọ bụla ọzọ na # na mbido ma ọ bụ hichapụ ya iji zere nsogbu na mmelite ahụ):
Anyị na -echekwa mgbanwe ndị ahụ wee gbuo usoro xscreensaver iji nwee ike melite nke ọma:
Na ọnụ anyị na-eme mmelite:
N'ebe a, anyị ga-echere ebe ọ ga-amalite ibudata nchịkọta na nhazi niile dị mkpa maka mmelite ahụ. Usoro a ga - ewe oge, yabụ enwere ike iji ya rụọ ọrụ ndị ọzọ ebe emelitere sistemu kọmputa gị.
Na njedebe ị ga-amalitegharị kọmputa gị maka mgbanwe niile iji rụpụta ọrụ na mgbe ịmalite ya ọzọ, ị ga-ahụ na ị nwere ụdị nke Devuan arụnyere.
Bụrụ na nke ngwugwu ọdịda, a ga-edozi ngwugwu ndị dara ada wee malite mmelite ahụ ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Devuan 4.0 "Chimaera" sitere na Debian 11, Linux 5.10 na ndị ọzọ
Ubuntu 21.10 “Impish Indri” na -eji mmelite, onye nrụnye ọhụụ na ihe ndị ọzọ